China steel core waya eriri factory na-emepụta | Bangyi
Ejikọtara eriri waya ahụ na eriri waya dị n'etiti. Akwụkwọ ozi IWS ma ọ bụ IWR nọchiri anya ya. Ngwongwo ígwè nke ígwè nke otu dayameta ahụ nwere ikike na-agbaji dị ukwuu karịa eriri eriri igwe na-ebu ibu ma na-ebu ibu ka ukwuu.
Coregwè eriri waya na-eme ka uwe na-eguzogide ọgwụ, na-eguzogide ọgwụ extrusion, ma nwee ndụ dị elu karịa eriri eriri waya. Ike na-agbaji na-adịtụ elu ma ịdị nro dị ntakịrị. Ngwunye eriri igwe dị elu karịa hemp isi waya waya dị na usoro nke nguzogide okpomọkụ dị elu. A na-ahọrọ ụdọ waya waya bụ isi maka ọnọdụ na-eguzogide ọgwụ na ọnọdụ okpomọkụ dị elu.
Ọnụahịa nke eriri igwe na-adịkarị elu karịa nke eriri isi eriri igwe, mana na-atụle ndụ ndụ na esemokwu eriri igwe ga-adịtụ mma, yabụ n'ozuzu, ọnụahịa nke igwe igwe anaghị agba nchara dị obere.
Ngwunye waya anyị nwere galvanized nwere àgwà ndị a:
1.The waya eriri ebunye ogologo-anya ibu.
Ihe nchekwa nchekwa a na-ebu ibu buru ibu, na ojiji ejiri nchekwa ma nwee ntụkwasị obi.
3. Light light, mfe na-ebu na iga.
4. O nwere ike iguzogide ọtụtụ ibu na-agbanwe agbanwe.
5. Ọ nwere oke ike ike, ike ọgwụgwụ na ike ike.
6. N'okpuru ọnọdụ ọrụ ọsọ ọsọ, ọ na-eyi uwe na-eguzogide ọgwụ, mgbochi mkpatụ, kwụsie ike na ọrụ, enwere ike iji ya mee ihe maka nkenke.
7. Good corrosion eguzogide, ike na-arụ ọrụ kwesịrị ke ọjọọ ọnọdụ nke dị iche iche na-emerụ media.
8. Ezigbo nro.
Eriri waya nwekwara ọtụtụ ebe eji eme ihe dị ka na coal, mmanụ ala, metallurgy, chemical, ụgbọ mmiri, àkwà mmiri, ike eletriki, roba, ụlọ ọrụ ndị agha, njem nleta, nchekwa mmiri, ụlọ ọrụ ọkụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Anyị galvanized ígwè waya eriri mgbe Ọdịdị bụ 1 * 7/7 7 7/1 1 19/7 7 19, na mgbe dayameta bụ 1mm-10mm. Enwere ike ịmepụta ya dịka usoro nke mba na mba ọzọ dị ka ISO, BS, DIN, JIS, ABS, LR, wdg Ọ bụrụ na ị nwere mkpa pụrụ iche, anyị nwekwara ike ịhazi ya dịka mkpa gị.
Aha ngwaahịa Galvanized Waya eriri na ígwè isi
Ihe onwunwe Carbon ígwè, 45 #, 55 #, 60 #, 70 #, wdg.
Dayameta nso 0.3mm - 12mm
Nhazi: 1X7, 1X19, 7x7, 7X19, 6X7 + FC, 6X19 + FC
Njirimara Ezigbo elu, elu corrosion na-eguzogide ọgwụ, elu ike ọgwụgwụ ike, magburu onwe okpomọkụ na-eguzogide ma na-free si akụkụ / longitudinal cracks, olulu na akara wdg
Mbukota: Ike osisi esi anwụde, Wrapping film, Ahịa chọrọ
Ngwa A na-eji ngwaahịa a maka ebuli, dọrọ na ojiji ndị ọzọ.
Oge Mbuga ozi: 7 ụbọchị kwa ton, Ka a ga-esi kpaa nkata
Nke gara aga: Hot itinye kpaliri ígwè waya eriri
Osote: Plastic ntekwasa ígwè waya eriri
Electro kpaliri Steel Waya eriri, Eriri igwe anaghị agba nchara Waya eriri, Steel Waya eriri kpaliri, Vkwanyere ntekwasa kpaliri Steel Waya eriri, China rụpụta kpaliri Steel Waya eriri, Igwe anaghị agba nchara Waya eriri ịkwanyere ntekwasa,